Fikarohana momba ny firaisana Ny fifandraisana amin'ny fakan'ny maty na ny fanahy, serasera ara-panahy, ny fahamaotiana ary ny fanandramana aorian'ny fiainana any an-tany Gary E. Schwartz - Fikarohana momba ny Reincarnation
Ny fikarohana nataon'i Gary E. Schwartz momba an'i John Edward sy ireo fitaovana hafa mifandray amin'ny maty
Gary E. Schwartz, PhD, dia mpampianatra ao amin'ny University of Arizona ary talen'ny Laboratoire for Advances in Consciousness and Health. Dr. Schwartz dia nahazo ny mari-pahaizana PhD momba ny psikolojia tao amin'ny Oniversiten'i Harvard ary profesora momba ny saina sy psikolojia tany amin'ny Oniversiten'i Yale talohan'ny nidirany tao amin'ny University of Arizona.
Dr. Schwartz, sary an-kavanana, dia liana hatry ny ela tamin'ny fanombanana ara-tsiansa ireo haino aman-jery, olona izay milaza fa afaka mifandray amin'ireo olona maty, izany hoe amin'ireo fanahy. Ny sasany amin'ireo fitaovana manerantany malaza dia misy John Edward, izay nasongadina tao amin'ny fahitalavitra Miverimberina, ary James Van Praagh, mpanoratra maotina indrindra amin'ny fifandraisana amin'ny maty.
HBO Fanandramana hamantarana ny fahamarinan'ny lohahevitra Mifandray amin'ny zavatry ny fanahy eo ambanin'ny fepetra mifehy
Te-hiresaka fanandramana iray notontosain'i Dr. Schwartz aho, miaraka amin'ny mpiara-miasa iray, Linda Russek, PhD, izay nalain'ny video Home Box Office (HBO), ilay orinasa fahitalavitra tariby. Araka izany, hataontsika hoe HBO Experiment ity fandinihana ity, izay hita ao amin'ny bokin'i Dr. Schwartz, Ny traikefa taorian'ny fiainana. Amin'ity fandinihana ity dia hanandrana manome fampahalalana amin'ny lohahevitra momba ny havan'ilay maty ny mpanelanelana. Hodinihintsika ho toy ny “vakiteny” ny fotoam-pivorian'ny medium sy ny lohahevitra.
Famolavolana fanandramana HBO Mediums miaraka amin'i John Edward, Suzanne Northrup, George Anderson, Anne Gehman & Laurie Campbell
Linda Russek, mpamokatra HBO ho an'ity tetikasa ity, dia nanitrikitrika fa tsy misy amin'ireo mpanelanelana na mpanandramana, anisan'izany i Gary Schwartz, no hahalala ny mombamomba ilay lohahevitra izay hataon'ireo mpanelanelana vakiteny. Amin'izany fomba izany, na ny mpanelanelana na ny mpanandrana dia samy tsy afaka mikaroka vaovao momba ilay lohahevitra talohan'ny andrana.
Ny fanandramana HBO dia natao tamin'ny 20 Febroary 1999 tao Tucson, Arizona, tao amin'ny trano iray natsangana manokana hisorohana ny fifandraisan'ny mpanelanelana sy ny lohahevitra. Rehefa tonga ireo mpanelanelana dia nentina tao amin'ny tokotanin'ny trano mimanda. Ny mpampita vaovao koa dia nitazona tsirairay mba tsy hahafahany mampitaha naoty eo anelanelan'ny vakiteny.
Ny lohahevitra voafidin'i Linda Russek, Patricia Price, dia nampidirina tao an-trano ary napetraka tao amin'ny efitrano hanaovana ny famakiana. Nipetraka tao amin'ny seza roa izy izay nesorin'ny lamba lamba fotsy, kloa, lamba lamba. Napetraka toy izao ny efijery mba tsy hahitan'ny mpanelanelana ny lohahevitra, ary amin'izany dia tsy ho afaka haka famantarana ireo mpampita vaovao mifototra amin'ny fifandraisana tsy misy resaka.
Ireo fitaovana dimy no nandray anjara tamin'ity fanandramana ity John Edward (sary eo ankavanana), Suzanne Northrup, George Anderson, Anne Gehman ary Laurie Campbell. Dr. Schwartz dia mihevitra ireo olona ireo ho mpanelanelana tena mahay. Ny atiny manokana avy amin'ny famakiana nataon'ireo mpanelanelana dimy dia tafiditra ao amin'ny bokin'i Gary Schwartz, Ny traikefa taorian'ny fiainana.
Famaritana ny lanjan'ny lenta
Ny horonan-tsary avy amin'ny fanandramana HBO dia niteraka transcript 200 pejy. Ny fampahalalana avy amin'ny horonantsary dia nosokajina ho karazana fampahalalana enina: anarana, lahateny, famaritana, zava-misy ara-tantara, toetra sy hevitra. Ny fomba fijery dia fanambarana iray toa ny ”tian'ny zanakao hilazako aminao fa tsy manome tsiny anao izy noho ny fahafatesany” (1) Ny hevitra, toa an'io, dia ho sarotra ny manamarina izany. Ny ankilany, ireo karazam-baovao dimy hafa, anarana, fanombohana, famaritana, zava-misy ara-tantara ary toetranao mora azo, dia azo hamarinina avy hatrany.
Amin'ny ankapobeny, ny fampahalalana nomen'ireo mpanelanelana 5, izay voarakitra an-tsoratra tamin'ny alàlan'ny sora-tanana horonantsary, dia niteraka 600 na sombim-baovao manokana. Ity fampahalalana ity dia namboarina ho antontan-taratasy ho an'ny iskor Pat Pat, isa. Ny antontan-taratasy dia tsy nanambara izay medium namoaka ny vaovao ho an'ny antontan-taratasy tsirairay. Araka izany dia tsy fantatry ny lohahevitra hoe iza no valiny naotiny. Ny lohahevitra, Pat Price, dia nangatahana mba hanamarina ny maha-marina ny singa tsirairay amin'ny fampahalalana omena ao amin'ireo antontan-taratasy. Naharitra adiny folo vao vita ny isa.
Rehefa vita ny fotoam-pivoriana niaraka tamin'ny mpanelanelana dia nanamboatra fifehezana ny fanandramana i Dr. Schwartz tamin'ny famoronana lisitr'ireo fanontaniana eny na tsia momba ireo havana maty an'i Patricia Price. Ho fanampin'izay, nametraka fanontaniana mivelatra koa momba ireo havana maty. Vondrona iray mifehy no noforonina nisy mpianatra 68 avy amin'ny University of Arizona izay tsy mpanelanelana na fanahy. Ny vondrona mifehy dia natsangana mba hamaritana hoe ohatrinona ny valiny marina mety ho azo amin'ny finavina fotsiny.
Avereno ny HBO Afterlife Experiment Assessing Mediums
Tena nahagaga ny valin'ny Fanandramana HBO. Ny elanelan'ny fahamarinana ho an'ireo mpampita vaovao dimy dia 77% ka hatramin'ny 95%, miaraka amin'ny salan'isan'ny entana marina ho an'ny 83%. Mifanohitra amin'izany, ny salan'isan'ny entana marina ho an'ny vondrona fanaraha-maso dia 36% fotsiny. Dr. Schwartz dia nanao izao fanisana izao:
"Raha ampitahaina amin'ny 83 isan-jato ho an'ny fampahalalam-baovao ny ampahany 36 ho an'ny vondrona mpianatra, ny lozam-pifanandrasan'ny fahasamihafana amin'io fahasamihafana io dia latsaky ny iray monja amin'ny folo tapitrisa." (2)
Ireo vokatra amin'ity fianarana ity dia aseho amin'ny takelaka atolotra etsy ambany (tsindrio raha hanitarana).
Ity fandinihana ity dia manome fanohanana matanjaka fa ny fanelanelanana, ny fahafahan'ny mpanelanelana amin'ny fifandraisana amin'ireo olona efa nodimandry, dia tranga mety. Marihina anefa fa tsy nahatratra isa 100% ireo mpanelanelana. Tokony ho takatra fa ny mpanelanelana sy ny saina dia tsy mamokatra vaovao marina 100% amin'ny fotoana. Na izany aza, tamin'ny alàlan'ity fanandramana ity dia naseho fa ny mpanelanelana dia afaka mamoaka vaovao marina amin'ny taha avo lenta kokoa noho izay azo kisendrasendra, isanjato izay manan-danja tokoa amin'ny statistika.
Mba hamerenana indray, Dr. Schwartz dia nanombana fa ny fahasamihafan'ireo fampahalalam-baovao mahavariana toy izany dia iray monja amin'ny 10 tapitrisa.
Ireo karazana fitsaboana sy fampihorohoroana
Amin'izay fotoana izay, andao hizaha io tranga io hatrany, satria misy karazana fampitaovana maro. Andeha hofarihintsika ny fanelanelanana ho toy ny fahafahan'ny olombelona mifampiresaka amin'ireo fanahy fanahy na olona maty efa maty, na ny fahaizana mamela ny fanahy iray hiteny amin'ny alàlan'ny mpanelanelana. Amin'ny fifanolanana, andao hamaritana ny olona iray ho "psychic" raha toa izany olona izany afaka mahazo vaovao amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny extrasensory, fa tsy misy idiran'ny fanahy fanahy.
Ny fifandraisana ara-panahy dia teny iray ampiasaina mba hamaritana ny trangan-javatra iainan'ny olombelona amin'ny fahazoana fahalalana avy amin'ny fanahy. Ny teny tsy misy dikany dia fifandraisana ara-panahy.
Mediam-bahoaka Trance sy Mediumship
Ny mpampita haino aman-jery dia miasa amin'ny alàlan'ny fandehanana misaintsaina ary mamela fanahy iray hampiasa ny vatan'ny mpanelanelana hifandray amin'ny olombelona. Rehefa misy fanahy tonga amin'ny alàlan'ny haino aman-jery, ny feon'ilay mpanelanelana, ny lantom-peo, ny endriny, ny fomba fiteniny ary ny hatsarany dia mety hiova tanteraka, hany ka toa lasa olona hafa ilay mpanelanelana. Matetika, ny mpampahalala vaovao dia tsy mahalala izay lazain'ny fanahy, na izay mitranga mandritra ny fivoriana, raha tsy mahita izany ilay mpanelanelana.
Fampahalalana tranainy fanta-daza iray izay miasa amin'izany fomba izany Kevin Ryerson, izay nasongadina tao amin'ny efatra Shirley MacLaine's boky. Nivazivazy i Kevin fa amin'ny asany dia "telefaona olombelona" izy, manome fifandraisana misy eo amin'ireo mpitarika fanahy miara-miasa aminy sy ireo mpanjifany. Tsy misy afa-tsy mpitaona fanahy vitsivitsy izay fantany tsara i Kevin.
Niara-niasa tamin'i Kevin be aho hatramin'ny 2001 ary hitako fa ny iray amin'ireo torolàlana fanahy izay alefany, izay Ahtun Re no anarany, dia manana fahaizana manao fiainana taloha na reincarnation mifanaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta. Ny toetran'i Ahtun Re, ny feony, ny volan'ny fahalalany ary ny hatsarany dia tsy mitovy amin'ny an'i Kevin. Mandritra ny fotoam-pivoriana dia manana fifanakalozan-kevitra mahery vaika aho miaraka amin'i Ahtun Re, fanahy iray, mivantana. Rehefa tapitra ny fotoam-pivarotana dia tsy manana fahalalana momba izay nitranga i Kevin.
Ny bokiko, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, dia mifototra amin'ny resaka ataoko miaraka amin'i Ahtun Re.
Ohatra iray hafa amin'ny fampahalalam-baovao tranzara iray izay naneho ny fampahalalam-baovao taloha dia hita ao amin'ny ireo raharaha momba ny harena ankavanan-tany izay misy an'i Penney Peirce. Ny torolàlana fanahy nampitaina tamin'ny haino aman-jery tao amin'ny tranga Peirce dia nanome fampahalalana momba ny fiainana taloha izay encyclopedic amin'ny sakany sy ny antsipiriany, mihoatra ny fantatry ny mpanelanelana.
Medium & Psychics mahatsiaro tena
Ny fitaovam-pandraharahana dia afaka mandefa hafatra avy amin'ny fanahy ihany koa rehefa mahatsiaro saina. Hans Christian King dia mpampita vaovao efa niasa toy izany. I Hans dia manana mpitari-dalana fanahy manokana efatra izay miara-miasa aminy. Rehefa mahita an'i Hans ny mpanjifa dia ireo mpitarika fanahy no manangona vaovao ho an'io olona io. Ny fanahy dia mitarika an-tariby avy eo mandefa izany fampahalalana izany amin'i Hans, izay mampita izany amin'ny client. Mahatsiaro tena tanteraka i Hans mandritra io dingana io.
Ny mahaliana, tamin'ny asa niarahako tamin'i Kevin Ryerson, no nahazoana ny fiainana taloha momba an'i John Edward sy Hans Christian King. Raha te hahalala bebe kokoa dia:
Trangam-panjakan'olo-tokana i Kate Fox | John Edward-hita ao ateraka indray
Trangam-panjakan-tsolika Nostradamus Hans Christian King
Ireo fitaovam-pifandraisan-tsoa amin'ireo izay nogadraina
Ny mpanelanelana amin'ny saina dia mety hahay manokana amin'ny fifandraisana amin'ireo olona efa nodimandry, matetika havan'ireo mpanjifa efa lasa izay tonga hijery ilay mpanelanelana. Ny sanganasan'i Gary Schwartz, voalaza etsy ambony, dia misy ireo karazana mpanelanelana ireo. John Edward dia mpanelanelana amin'ny tontolo iainana izay miasa miaraka amina fanahy maromaro na mpitari-dalana fanahy izay manampy azy amin'ny fifandraisana amin'ireo havana maty efa maty. Nantsoin'i John hoe "The Boys" ireo mpanampy na mpiara-miasa aminy.
Ny sekta matetika dia manandrana manilika ny asan'ny fitaovana toy ny famonoana. Ny finoana ny talentany anefa dia tsy vitan'ny hoe avy amin'ny asan'ny tsirairay toa an-dry Dr. Gary Schwartz ihany, fa avy amin'ny traikefa manokana amin'ny media sy ny fijoroana vavolombelona fa afaka manome fampahalalana marina izy ireo, fampahalalana izay tsy ho azon'ny olon-tsotra .
Nahazo famakiana toy izany aho tamin'ny solosaina antsoina hoe Felix Lee Lerma. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any amin'ny:
Ny fampidirana an'i Felix Lee Lerma
Medium & Psychics Fahaiza-manao samihafa
Eto am-pamaranana dia misy porofo fa misy olona manan-talenta izay afaka mifandray amin'ny maty na fanahy. Ny mpampita vaovao dia samy hafa amin'ny zavatra azony atao. Ohatra, Kevin Ryerson dia tsy manana fahaizana mifandray amin'ireo havany efa maty; fa kosa ny fampahalalàny azy dia misy fiaraha-miasa amin'ny andiana mpitari-dalana na mpampianatra manokana. Mifanohitra amin'izany, John Edward tsy mazàna dia mampita fitarihana fanahy manokana, fa kosa miara-miasa amin'ireo havan'ireo mpanjifany efa nodimandry.
1. Schwartz, Gary E., The Experiments Afterlife, Pocket Books, 2002, pejy 119
2. Schwartz, Gary E., The Experiments Afterlife, Pocket Books, 2002, pejy 121